Ndụmọdụ maka njem na Costa Rica: Documentation, Health and Gastronomy | Njem akụkọ
Ndụmọdụ maka njem na Costa Rica
Louis Martinez | | Atụmatụ, Costa Rica
na Ndụmọdụ maka njem na Costa Rica ha dị mkpa karịa mgbe ọ bụla n'ihi ọganihu njem nlegharị anya nke mba Central America na-enwe. Kwa afọ ọ na-enweta ọtụtụ ndị ọbịa maka ihe ebube okike ya, ihu igwe ya mara mma, nke ya osimiri nrọ na ọnụ ọgụgụ ndị na-anabata ya.
Ma nke mbụ, o nwere ụfọdụ ogige ntụrụndụ mba iri atọ ụdị na nha niile. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-ekwu banyere ugwu mgbawa Arenal, oke osimiri Ballena ma ọ bụ agwaetiti Coco. N'aka nke ọzọ, climatology bụ ebe okpomọkụ, na-enwe okpomọkụ yiri nke ahụ n'ime afọ, ọ bụ ezie na ọ na-enwekwa ogologo oge mmiri ozuzo. Na, banyere ndị bi na ya, isiokwu ya aghọwo ndị a ma ama "Ndụ dị ọcha" dị ka ihe ịrịba ama nke nchekwube ya dị mkpa. Maka ihe ndị a niile, anyị chere na ọ dị mkpa ịnye gị ndụmọdụ ụfọdụ maka njem na Costa Rica.
1 Dị ịdị ọcha
2 Akpa na akwụkwọ iji banye obodo
3 Oge kacha mma iji gaa Costa Rica na nchekwa
4 Ndụmọdụ maka ịga Costa Rica gbasara nri
5 Ụfọdụ nleta agaghị ekwe omume na Costa Rica
5.1 San José
5.2 Ndụmọdụ maka njem na Costa Rica: National Parks
Dị ịdị ọcha
Paseo de Colón na San José, Costa Rica
Enweghị ọgwụ mgbochi mmanye iji banye Costa Rica. Agbanyeghị, Ministri Ahụike na-atụ aro ụfọdụ. Kpọmkwem, ọgwụ mgbochi ọrịa ịba ọcha n'anya A na B, nke tetanus na diphtheria na nke oria ojoo. Maka COVID-19, ọ bụghị iwu, mana anyị na-adụ gị ọdụ ka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụrụ na ịmebeghị ya, ma ọ bụghị ya, ha ga-achọ ọgwụ mgbochi. mkpuchi ahụike ịbanye na obodo na, na mgbakwunye, ha nwere ike ịrịọ gị akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi iji nweta ọtụtụ ebe.
N'ọnọdụ ọ bụla, n'agbanyeghị ọrịa na-efe efe, ọ dịkwa mma ka ị nweta mkpuchi ahụike, ebe ọ bụ na Costa Rica na Spain. ha enweghị nkwekọrịta ahụike. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa, ị ga-akwụ ụgwọ enyemaka.
N'aka nke ọzọ, ewezuga n'ime ime obodo mepere emepe. Enwere ike ịṅụ mmiri ahụ aṅụ na Central America obodo. Dịka ọmụmaatụ, na akụkụ Tortuguero, ị gaghị ewere ya. N'ọnọdụ ọ bụla, iji zere nsogbu, anyị na-adụ ọdụ ka ị na-aṅụ mmiri mmiri mgbe niile.
Ikwesiri inwe ezigbo ihe anwụnta na-ere ọgwụ. Na Costa Rica enwere ọtụtụ ma ụfọdụ bụ ndị na-ebunye ọrịa. Ọzọkwa, gbalịa na-eyi ogologo aka uwe n'abalị.
Akpa na akwụkwọ iji banye obodo
Akwụkwọ ikike ngafe Spanish
N'ihe gbasara nke mbụ, ọ bụ iwu n'ozuzu ka ị na-edobe akwụkwọ na ego gị nke ọma ka enweghị ike izu ohi. N'ọnọdụ ọ bụla, na-ebu a foto nke paspọtụ gị igosi ya ma ọ bụrụ na mfu ma ọ bụ izu ohi.
Ọ dịkwa mma maka ibu ụfọdụ uwe na-ekpo ọkụ. Ọ bụ ezie na ihu igwe dị mma, ọ na-agbanwe site n'otu mpaghara gaa na nke ọzọ na Costa Rica. N'akụkụ osimiri ọ nwere ike ịbụ ogo Celsius iri atọ, ma n'ime ime ime ị nwere ike ịhụ onwe gị na ọkara okpomọkụ. Maka akpụkpọ ụkwụ, were ụdị abụọ: flip-flops maka osimiri na nke dị mma maka njem na ụzọ ugwu.
Ọzọkwa, tinye n'ime akpa gị a nkwụnye ọkụ. Na mba Central America, plọg ahụ bụ ụdị A / B, ebe na Europe ha bụ C. Ya mere, ị ga-achọ ya iji chaja ngwaọrụ eletrik gị.
N'aka nke ọzọ, iji banye Costa Rica, ị ga-achọ ihe paspọtụ na kwa nke a na-akpọ ngafe ahụike, nke ị nwere ike ibudata site na otu n'ime ọnụ ụzọ ahụike gọọmentị obodo (https://salud.go.cr/). N'otu aka ahụ, dị ka anyị kwuru, ọ bụrụ na a gbaghị gị ọgwụ, ị ga-enweta mkpuchi ahụike. Nke a bụkwa iwu maka ndị na-erubeghị afọ 18, n'agbanyeghị na ha bụ.
Oge kacha mma iji gaa Costa Rica na nchekwa
Playa Blanca, na Cahuita National Park
Site na ihe niile anyị kọwapụtara gị na mbụ gbasara ihu igwe, ị ga-achọpụta na oge kacha mma iji gaa na mba Central America bụ oge ọkọchị. Ọ site na Nọvemba ruo Eprel. Ma ị kwesịrị ịma na ọ bụrụ na ị na-eme njem n'oge mmiri ozuzo, mmiri agaghị ada ụbọchị dum, dị ka ọ na-eme na mpaghara okpomọkụ ndị ọzọ. O yikarịrị ka mmiri ozuzo, mana a ga-enwekwa ụbọchị nkụ. Na kwa, ịbụ obere oge, ọnụ ahịa dị ọnụ ala.
N'ihe gbasara nchekwa, Costa Rica bụ jụụ jụụ. Otú ọ dị, e nwere akụkụ nke nnukwu obodo ndị nwere ike ịdị ize ndụ n'abalị. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ San José ma ọ bụ Puerto Limón. N'ọnọdụ ọ bụla, kpachara anya.
N'aka nke ọzọ, ego gọọmentị bụ eriri afọ ma anyị na-adụ ọdụ ka ị jide ya tupu ị gaa njem. Ya mere, ị ga-ezere ịchọ ụlọ mgbanwe na Costa Rica. Ọzọkwa, buru n'uche na ọtụtụ kaadị kredit na-ana nnukwu ụgwọ mgbe ị na-eji ha na mba ofesi.
Otú ọ dị, ụfọdụ ụlọ akụ na-enye kaadị njem na ha enweghị ha. N'otu aka ahụ, kwa dollar na ọbụna euro na-anabata. Mana, ọ bụrụ na i jiri nke ọ bụla n'ime ndị a kwụọ ụgwọ, akaụntụ ahụ ga-adị ntakịrị ọnụ karịa.
N'ikpeazụ, gbasara nchekwa gị, anyị chọrọ ịgwa gị na ị nwere kpachara anya maka okporo ụzọ. Okporo ụzọ na mba Central America bụ ọgba aghara na ọ bụghị ihe ọhụrụ ịhụ ntụgharị ma ọ bụ gafere na-ezighi ezi. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbazite ụgbọ ala, kpachara anya. N'echiche a, anyị na-akwado ka ị mee ya ka ị nwetakwuo nnwere onwe ịmegharị. Na kwa na ị na-ahọrọ ụdị 4 x 4 nwere mkpuchi zuru oke iji nwee ike iru ebe ọ bụla.
Ndụmọdụ maka ịga Costa Rica gbasara nri
Otu efere gallo pinto
Ndụmọdụ mbụ anyị ga-enye gị gbasara nri nke mba Central America bụ na, ọ bụrụ na ịchọrọ iri nri nke ọma maka obere ego, chọọ ụlọ ọrụ a maara dị ka. soda. Ha bụ obere ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị n'ime obodo nwere efere ndị na-atọ ụtọ na ọnụ ala dị ọnụ ala.
Banyere gastronomy, nke Costa Rica na-atọ ụtọ. Ọ bụ n'ihi na njikọ nke nwa afọ, Mediterranean nri na ụfọdụ African ọcha. Mana ihe kacha mma bụ na anyị na-egosi gị ụfọdụ n'ime ha efere a na-ahụkarị kacha ụtọ na nke ahụ, n'ezie, anyị na-akwado ka ị gbalịa. Ndụmọdụ anyị maka ịga Costa Rica agaghị ezu ezu ma ọ bụrụ na anyị agwaghị gị gbasara gastronomy ya.
Ọ bụ ikpe nke Ọkụkọ hụrụ n'anya, na-ewu ewu nke na a na-eri ya n'oge ọ bụla n'ụbọchị, ọ bụ ezie na a na-emekarị ya maka nri ụtụtụ. N'agbanyeghị aha ya, ọ naghị ebu ọkụkọ ma ọ bụ ọkụkọ. Ọ bụ ngwakọta osikapa, agwa, yabasị, chili dị ụtọ na cilantro nke a na-eri naanị ya ma ọ bụ dị ka ihe ịchọ mma maka efere ndị ọzọ. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ usoro nri a na-ahụkarị nke mba Latin America.
Ma ọ bụkwa onye a ma ama casado, dị ike karịa nke gara aga. N'ezie, anyị nwere ike ịgwa gị na ọ bụ nri zuru oke. Ọ dabere n'ụdị anụ ụfọdụ dị ka anụ ezi ma ọ bụ anụ ehi, mana enwere ike dochie ya na azụ na ọbụna eggplant ma ọ bụ soy. Na mgbakwunye, ọ na-agụnye osikapa ma ọ bụ pasta, akwa na ihe oriri.
Dị ka ị ga-ahụ, osikapa Ọ bụ isi nri Tico. A na-ejikwa ya maka ọtụtụ efere ndị ọzọ dị ka osikapa na obi nkwu, nke jikọtara ya na nwa osisi ma ọ bụ obi nke pejibaye, ụdị nkwụ. Ma salads, mincemeat na úkwù juru eju bụkwa ihe a na-ahụkarị.
Maka akụkụ ya, nke chifrijo Ọ na-enwe nhịahụ anụ ezi, osikapa, agwa, ube oyibo na tortilla ọka e ghere eghe, nke ejiri ụdị chimichurri mee ihe. Na nke Creole stew O nwere anụ, sausaji, akwụkwọ nri, chickpeas, àkwá sie sie ike, oliv, plums ma ọ bụ mịrị amị, yabasị na chili dị ụtọ.
Ma ofe, anyị na-akwado tripe ma ọ bụ meatballs na, gbasara tamaleNdị jupụtara na ntụ ọka plantain ndụ ndụ ma ọ bụ nke e ji ntụ ọka akpu mee na-atọ ụtọ. Banyere nke ikpeazụ, ha na-ewu ewu nke ukwuu nkekọ, ụfọdụ croquettes ejiri ya mee nke nwekwara cheese, anụ ma ọ bụ ọkụkọ.
Ụfọdụ nleta agaghị ekwe omume na Costa Rica
Iji mechaa ndụmọdụ anyị maka ịga Costa Rica, anyị ga-ekwu nkenke banyere ụfọdụ ebe dị mkpa. Iji mee nke a, anyị ga-amalite na isi obodo wee gosi ha na mba ndị ọzọ.
National Theatre nke Costa Rica, na San José
Tọrọ ntọala na 1738, obodo isi obodo e articulated gburugburu omenala Square, ebe ị nwere ike ịhụ Theaterlọ ihe nkiri mba, oyiri nke Opera Parisna Museumlọ ihe nkiri ọla edo. Ma ndị kasị pụta ìhè si monumental echiche nke San José bụ ya ụlọ neoclassical style, ọtụtụ n'ime ha mejupụtara agbata obi Amon, tinyere ndị ọzọ eclectic nke mmalite narị afọ nke iri abụọ. N'ime ndị ikpeazụ, ndị Lelọ nke Moor, na-amanye Post na Telegraph ụlọ (nakwa neoclassicist) ma ọ bụ nke dị na etiti ihe nkiri.
Maka akụkụ ya, neoclassical na-agụnyekwa ihe ndị ahụ Theaterlọ ihe nkiri mba na Cureral Metropolitana, nke e wuru na mmalite narị afọ nke XNUMX. N'akụkụ ya, ị nwere ike ịga leta ụlọ nsọ ndị ọzọ mara mma dịka nke Ụka nke Nwanyị anyị nke La Merced na La Soledad.
Ndụmọdụ maka njem na Costa Rica: National Parks
Maka mba ndị ọzọ dị na Central America, ị nwere ike ịga na obodo ndị mara mma dịka Cartago, otu n'ime ndị kasị ochie; Puerto Limon, ikekwe ọdụ ụgbọ mmiri ya kacha mkpa; Ugwu Green, zuru okè maka ecotourism; Alajuela, gburugburu Central Cordillera, ma ọ bụ Puntarenas, na nsọtụ Oke Osimiri Pasifik.
Ma nnukwu njem nlegharị anya nke Costa Rica bụ ya, ọdịdị ya. Dị ka anyị gwara gị, o nwere ogige ntụrụndụ mba iri atọ. N'ime ha, ọ dị mkpa ịkọwa Ndị Corcovado. Ọ bụ ezie na ọnọdụ ya dị nnọọ anya, ebe ọ bụ na Osa Peninsula, anyị na-akwado ka ị gaa na ya n'ihi na ọ nwere ụlọ naanị oke ọhịa mmiri ozuzo mbụ dị n'ụwa.
Ọ dịkwa egwu Ballena Marine National Park. Dị ka aha ya na-egosi, ị nwere ike ịhụ nnukwu anụ mammals dị ka whale humpback ma ọ bụ dolphin ndị ahụrụ anya na nke karama, yana mmiri mmiri.
Àgwà dị iche iche nwere Rincon de la Vieja National Park, nke sitere n'aha ugwu mgbawa ugwu ugwu nke ị nwere ike iru n'ụkwụ, nke ị na-enwekwa ọmarịcha echiche banyere Nicoya Peninsula na Lake Nicaragua.
Na nkenke, anyị nwere ike ịkwado ọtụtụ ogige ntụrụndụ ndị ọzọ dị ka onye Tortuguero, ebe ị pụrụ ịhụ akwụ nke oké osimiri nduru, na nke Arenal Volcano, nke Agba ma ọ bụ nke enyi, n'ugwu Talamanca.
N'ikpeazụ, anyị enyela gị ụfọdụ Ndụmọdụ maka njem na Costa Rica. Mana anyị chọkwara igosi gị ụfọdụ ebe ị ga-aga na mba Central America a, otu n'ime ihe kacha mma n'ụwa na ndị mmadụ ama ama maka ịdị ndụ na nnabata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Costa Rica » Ndụmọdụ maka njem na Costa Rica
Omenala na-adịghị ahụkebe n'ụwa
Calas nke Cadaques